Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း)
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride သည် မူးယစ်စေသော အာနိသင်ရှိသည့် အနာသက်သာဆေး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆေးသည် ဦးနှောက်ရှိအာရုံကြောများကို မူးယစ်ထိုင်းမှိုင်းစေခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုကို သက်သာစေပါသည်။
ထိုဆေးကို အများအာဖြင့် ပြင်းထန် အဆင့်နှင့် အလယ်လတ်အဆင့်ရှိသော နာကျင်မှုများကို ခဏတာ သက်သာစေရန် အသုံးပြုပါသည်။ ခွဲစိတ်မှုများ မပြုလုပ်မီနှင့် ပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်း၊ ကလေးမွေးနေစဉ် နာကျင်မှုများ သက်သာအောင် သုံးသောဆေး ဖြစ်ပါသည်။
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ကို အများအားဖြင့် ဆေးရုံ ဆေးခန်းများတွင် ထိုးဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ဆေးအရည်သည် အရောင်နောက်နေခြင်း၊အရောင်ပြောင်းနေခြင်း၊ ဆေးဗူးများကွဲကြေပျက်စီးနေခြင်းများရှိလျှင် ဆေးကို မသုံးပါနှင့်။ ထို့ပြင် ထိုးဆေးကို မှီဝဲနေစဉ်တွင် ရေများများသောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ကို ၃၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရပ်စ်အောက် မှာသိမ်းပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ pethidine/meperidine hydrochloride ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ pethidine/meperidine hydrochloride ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
pethidine/meperidine hydrochloride ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
pethidine/meperidine hydrochloride ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ထဲတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
သင့်တွင် အသက်ရှုကျပ်ခြင်း၊ အသက်ရှုနှုန်းနှေးခြင်းများဖြစ်နေလျှင်
ပြီးခဲ့သော ၂ပတ်အတွင်းတွင် monoamine oxidase inhibitor ( phenelzine) ဆေးများ သောက်ထားလျှင်
ritonavir, sibutramine, or sodium oxybate (GHB)စသည့်ဆေးများ သောက်နေလျှင်
codeine နှင့် morphine ပါသောဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်လျှင်
အရက်နှင့် မူးယစ်စေသော အရာများ သောက်နေလျှင်၊အရက်ဖြတ်ခြင်း၊ ဆေးဖြတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ထားလျှင်
ယခုဆေးသည် မူးဝေခြင်း၊ မိုက်ခနဲဖြစ်ခြင်း ၊ ခေါင်းမကြည်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အရက်သောက်ခြင်း၊ ရာသီဥတု ပူအိုက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်းတို့က ပိုပြီး မူးဝေစေပါသည်။ ထိုသို့ မဖြစ်အောင် အထူးသဖြင့် မနက်ပိုင်း အချိန်များတွင် အထိုင်အထကို ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လာလျှင် ထိုင်ခြင်း၊ လဲလျောင်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
ယခုဆေးသည် ဝမ်းချုပ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းနှုတ်ဆေးများ၊ ဝမ်းပျော့ဆေးများ သုံးမည်ဆိုပါက ဆရာဝန်အား အရင်တိုင်ပင်သင့်ပါသည်။ ထို့ပြင် အမျှင်ဓါတ်များသော အစားအစာများစားခြင်း၊ ရေများများသောက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းများများ လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဝမ်းမချုပ်စေရန် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်လျက်မှ ဝမ်းချုပ်လာလျှင် ဆရာဝန်ထံသွားပြပါ။
ဆေးကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာထက် ပိုသုံးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဆေးလွန်ကာ အဆိပ်သင့်စေသည့်အပြင် တက်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် မပါဘဲ ရုတ်တရက် ရပ်လိုက်ခြင်းမျိုး မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဆေးသောက်ချိန် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကျော်လွန်လာလျှင် ဆရာဝန်အားတိုင်ပင်ပါ။ ဆရာဝန်က ဆေး၏ဆိုးကျိုးများ မခံစားရအောင် ဖြေးဖြေးချင်းဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
ယခုဆေးကို ထိုးနေစဉ် ဆေးကုသမှုများ၊ ခွဲစိတ်မှုများ၊ သွားနှင့် ခံတွင်းကုသမှုများ ခံယူရမည်ဆိုပါက မပြုလုပ်မီ ဆရာဝန်အားပြောပြပါ။
ယခုဆေးကို အသက်ကြီးသူများနှင့် ကလေးငယ်များတွင် သတိနှင့် အသုံးပြုပါ။ ကလေးငယ်များသည် ဆေးကြောင့် အသက်ရှုနှေးခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးခြင်း၊ ပမာဏများစွာသုံးခြင်းသည် လိုအပ်သည်ထက်ပိုသုံးခြင်းဖြစ်သွားသောကြောင့် ဆေးယဉ်ပါးသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆေးကို သတ်မှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာထက် ပိုသုံးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဆေးသုံးနေရင်း ဆေးမတိုးတော့လျှင် ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
ထို့ပြင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ သုံးခြင်းကြောင့် ဆေးကို မသုံးရမနေနိုင်အောင် ဖြစ်သွားစေပါသည်။ ယင်းကို ဆေးစွဲခြင်းဟုခေါ်ပါသည်။
ဆေးကို ရုတ်တရက် ဖြတ်လိုက်လျှင် ဆေးဖြတ်ခြင်း၏ လက္ခဏာများဖြစ်သော စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ချမ်းခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ သူငယ်အိမ်များ ကျယ်ခြင်း၊နှလုံးခုန် အသက်ရှုနှုန်းများ မြန်ခြင်း၊မျက်ရည်များ ကျခြင်း၊ဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ အဆစ်များနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ အဆက်မပြတ် ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းမူးခြင်း၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ဗိုက်ရစ်ခြင်း၊ ချွေးပြန်ခြင်း၊ သန်းခြင်း တို့ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
စိတ်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မူမမှန်ခြင်း
နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ဗိုက်ရစ်ခြင်း
ပြင်းထန်စွာအဆက်မပြတ် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း
အမြင်အာရုံများ ပြောင်းလဲခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အောက်ပါဆေးများသည် pethidine/meperidine hydrochloride နဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်သောဆေးများ ဖြစ်ပါသည်။
မူးယစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ၊ မဖြစ်စေသော butorphanol, pentazocine, naltrexone, rifamycins စသည့် ဆေးများအားလုံးသည် pethidine ၏ အာနိသင်ကို လျော့ပါးစေပါသည်။
Furazolidone , MAOIs (e.g., phenelzine) ဆေးများသည် မေ့မြောခြင်းကိုဖြစ်စေခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်စေခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း စသည့် pethidine ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) (e.g., fluoxetine) , sibutramine ဆေးများသည် ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း၊ စိတ်အာရုံများ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အကြောဆွဲခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း စသည့် pethidine ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
Acyclovir, cimetidine, phenothiazines (e.g., chlorpromazine), phenytoin, ritonavir ဆေးများသည် pethidine ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
Cyclobenzaprine, sodium oxybate ဆေးများသည် pethidine ၏ အာနိသင်ကို လွန်ကဲစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
pethidine/meperidine hydrochloride က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါ ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိနေပါက ဆရာဝန်အား အသိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အဆုတ်ရောဂါ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ (ဥပမာ- ရင်ကျပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည် အဆုတ်လေပြွန်ကျဉ်းရောဂါ ၊ အဆုတ်ကြောင့် ဖြစ်သော နှလုံးရောဂါ)
သွေးထဲတွင် အောက်ဆီဂျင်နည်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်များနေခြင်း
Adrenal ဂလင်းနှင့် ဆိုင်သောရောဂါများ ဖြစ်ခြင်း
အသည်း နှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါများ ရှိခြင်း
အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်း ပြသနာများရှိခြင်း (ဥပမာ- အူရောင်ခြင်း)
မကြာသေးမီက ခေါင်းကို ထိခိုက်ဖူးခြင်း၊ ဦးနှောက်အကြိတ်များ ရှိခြင်း၊ ကြီးထွားလာခြင်း၊ ဦးနှောက်ထဲရှိအရည်များ ဖိအားများခြင်း
အရက်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ ဆေးစွဲခြင်း၊ စိတ်မူမမှန်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံရန် အတွေးများဝင်ဖူးခြင်း
ပိုးသတ်ဆေးများသောက်ခြင်းကြောင့် အူရောင်ပြီး ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းခြင်း၊ အလွန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နာကျင်မှု အဖွဲ့အစည်း (၂၀၀၇)၏အဆိုအရ pethidine/meperidine hydrochloride သည် နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့် ပထမဦးစားပေး ဆေးမဟုတ်ပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာ မရှိတော့မှသာလျှင် ခဏတာနာကျင်မှုများ (၄၈ နာရီအောက်) အတွက် ဆေးပမာဏသည် တစ်နာရီလျှင် 600 mg မကျော်သင့်ပါ။ ဆေးကို ခဏတာနာကျင်ခြင်း ဖြစ်စေ၊ နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းဖြစ်စေ သောက်ဆေးအနေဖြင့် ပေးခြင်းကို လုံးဝမထောက်ခံထားပါ။
နာကျင်မှု : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ သောက်ဆေး၊ အသားထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး 50-150 mg နှင့် ၃/၄ နာရီခြားတွင် လူနာ၏ တုန့်ပြန်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ထိုးနိုင်ပါသည်။
မခွဲစိတ်မီ : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး 50-150 mg နှင့် ၃/၄ နာရီခြားတွင် လူနာ၏ တုန့်ပြန်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ထိုးနိုင်ပါသည်။
ဆေးကိုဆက်တိုက်သွင်းခြင်း : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ တစ်နာရီလျှင် 15-35 mg ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးမွေးချိန်တွင် အနာသက်သာစေရန် : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး 50-100 mg နှင့် ၁နာရီမှ ၃ နာရီခြားတွင် လူနာ၏ တုန့်ပြန်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ထိုးနိုင်ပါသည်။
ဆေးပမာဏ နှင့်ပတ်သက်ပြီး အသိပေးခြင်း
အသည်းမကောင်းသူများတွင် ပထမအစတွင် ဆေးပမာဏကို လျှော့ပေးပါ။ အသည်းခြောက်သူများတွင် ဆေး၏အာနိသင် လွန်ကဲနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာသောက်ဆေး 50 mg ၄ နာရီခြား သို့မဟုတ် အသားထိုးဆေး 25 mg ၄နာရီခြား ဖြစ်ပါသည်။ ၄၈ နာရီအောက် နာကျင်မှုများအတွက် တကြိမ် ၂ ကြိမ်အထိသာ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အမေရိကန်နိုင်ငံ နာကျင်မှု အဖွဲ့အစည်း (၂၀၀၇)၏အဆို အရ meperidine သည် နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့် ပထမဦးစားပေး ဆေးမဟုတ်ပါ။
နာကျင်မှု : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ သောက်ဆေး၊ အသားထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး 1-1.8 mg/kg နှင့် ၃/၄ နာရီခြားတွင် လူနာ၏ တုန့်ပြန်မှု အပေါ်မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ထိုးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် 100 mg ထက် မကျော်ရပါ။
မခွဲစိတ်မီ : သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ အသားထိုးဆေး၊ အရေပြားအောက်ထိုးဆေး 1.1-2.2 mg/kg ကို မေ့ဆေးမပေးမီ မိနစ် ၃၀ မှ ၉၀ အလိုတွင် ပေးနိုင်ပါသည်။
Pethidine/Meperidine Hydrochloride (ပက်သဒင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
pethidine/meperidine hydrochloride ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
pethidine/meperidine hydrochloride ဆေးပြား Schedule II50mg, 100mg
pethidine/meperidine hydrochloride သောက်ဆေးရည် 50mg/5mL
pethidine/meperidine hydrochloride ထိုးဆေးရည် Schedule II25mg/mL, 50mg/mL, 75mg/mL, 100mg/mL
pethidine/meperidine hydrochloride ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။